ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မဲမဆွယ်ရင် သူတို့လည်း သိပ်တော့ မလွယ်ဘူး – Nyang Media
သူတို့တချိန်က အပြင်းအထန်ကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့ ဥပဒေကိုပြန်သုံးမယ်ဟေ့ဆိုတော့၊ ခင်ဗျားစဉ်းစားကြည့်လေ။ နိုင်ငံရေးသမား တစ်ယောက်ရဲ့သီလရှိတယ်၊ နိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်ရဲ့ ကျင့်ဝတ်ရှိတယ်။ အဲဒီ နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ ကျင့်ဝတ်၊ သီလ၊ နောက် ရိုးသားဖြောင့်မတ်မှု အဲဒါတွေကို ချိုးဖေါက်ရာမကျဘူးလား . . .
ပါတီသက်တမ်းနှစ် (၃၀) ကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်သော SNLD ပါတီသည် ၁၉၈၈ နောက်ပိုင်း မြန်မာ့နိုင်ငံရေးခရီးကြမ်းတွင် ဒီမိုကရေစီ အရေးအတွက် အခက်အခဲအကျပ်အတည်းအမျိုးမျိုးကြားမှ ကြိုးစားရပ်တည်ခဲ့ကြသည့် နိုင်ငံရေးပါတီများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်နေမှုများအပါအဝင် လက်ရှိမြန်မာ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်ပြီး SNLD (ရှမ်းတိုင်းရင်းသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်) ပါတီ၏ ဒုဥက္ကဋ္ဌ (၁) ဦးစိုင်းညွှန့်လွင်ကို ငြမ်းမီဒီယာက တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခဲ့သည်။
ငြမ်းမီဒီယာ – လက်ရှိရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဟာ အရင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဟောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ အမိန့်အမှတ် (၃၁/၂၀၁၅) ကို ပြန်အသုံးပြုမယ့် သဘောရှိတယ်လို့ ဦးစိုင်းညွှန့်လွင်ရေးတဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ထဲမှာ ဖတ်ရပါတယ်။ တကယ်လို့များ (၃၁/၂၀၁၅) ကို ပြန်သုံးရင် ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုရဲ့ မျှတမှုရေချိန်က ဘယ်လိုများဖြစ်လာနိုင်ပါသလဲ။
USNL – အခုက သူတို့ အဲဒီအမိန့်အမှတ် (၃၁/၂၀၁၅) ကိုပြန်သုံးမယ်လို့ ပြောထားပြီးပြီ။ ကျွန်တော့်ခံစားချက်က ဘာလဲဆိုတော့၊ ကျွန်တော်တို့ အမှုဖြစ်ပါတယ်။ အမှုဖြစ်တယ်ဆိုတာ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရှမ်းတိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး နေရာဝင်ပြိုင်တဲ့ ကိစ္စပေါ့။ ဆိုတော့ အဆင့်ဆင့်သွားကြပါတယ်။ နောက်ဆုံးအဆင့်မှာ အကုန်ပြန်ဆုံးဖြတ်တယ်။ အဲဒီမှာ NLD ပဲနိုင်ပါတယ်။ လျောက်လွှာကို ပယ်ချလိုက်တယ်ပေါ့။ အဲဒီနောက်ဆုံးအဆင့်မှာ။ OK ဒါကလည်း ကျွန်တော်တို့နားလည်လို့ရတယ်။ ဒါကတော့ သူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲလေ နော။ ဒါပေမယ့် ဘာကြောင့်ဒီလို ဆုံးဖြတ်သလဲဆိုတာ ကျွန်တော်သိချင်တာ။ ဟုတ်ပြီ၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ချတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆုံးဖြတ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းရှိတယ်လေ။ အဲဒါကို ကျွန်တော်သိချင်တာ။ ဆိုတော့ အဲဒီနေ့မှာပဲ၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ချတဲ့ နေရာမှာပဲ စီရင်ချက်မိတ္တူကို ကူးဖို့တောင်းဆိုတော့ ကူးခွင့်မရှိဘူးတဲ့။ ဆိုတော့ ဘယ်တရားရုံးဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်ခုံရုံးဖြစ်ဖြစ် ပွင့်လင်းမြင်သာတယ်ဟေ့ဆိုရင် စီရင်ချက်မိတ္တူကို ကူးခွင့်ရှိရမယ်လေ။ သူတို့က ဘာပြောသလဲဆိုတော့ နိုင်ငံတော် ပြန်တမ်း မှာ ထည့်မှာမို့လို့ ဒါကိုမိတ္တူကူးခွင့် ပေးစရာ မလိုဘူးပေါ့။ ပြန်တမ်းမှာကဘယ်သူနိုင်တယ်၊ ဘယ်သူရှုံးတယ် ဒါပဲ ထည့်မှာ လေ။ ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာ အရှုံးအနိုင်အဖြေမဟုတ်ဘူး။ ဘာကြောင့်အရှုံးလို့သတ်မှတ်ရတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် တို့ သိချင်တာ။ အဲဒီမှာ အချက် (၂) ချက်ရှိတယ်။ NLD ပါတီမှာ မူဝါဒရှိတယ် တဲ့၊ ခုံရုံးကပြောတာနော်။ ဘာမူဝါဒလည်းဆိုတော့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကို သွားဝန်းရံတဲ့လူတွေက ကိုယ့်စရိတ်နဲ့ကိုယ်ပဲ ဝန်းရံရမယ်၊ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ကို ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး မဖြစ်အောင်ဆိုပြီး အဲဒီမူဝါဒကို ညွှန်ကြား ထားတာရှိတယ် တဲ့။ ပါတီမှာ အဲဒီလိုညွှန်ကြားထားတဲ့အတွက်၊ ကိုယ်စားလှယ် လောင်းနဲ့ အတူတူသွားပြီးတော့ မဲဆွယ်တဲ့လူတွေဟာ သူ့ပိုက်ဆံသူသုံးတဲ့အတွက် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရဲ့ စာရင်းထဲမှာ ထည့်သွင်းခြင်း မရှိတာ မှန်တယ်ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်တယ်။ အဲဒီလိုပေါ့။ ဒါက ၂၀၂၀ မှာဘာဖြစ်လာနိုင်သလဲ ခင်ဗျားစဉ်းစားကြည့်လေ။ သူက အဲဒီလို ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီလေ။ ဒီလူတွေပဲဆုံးဖြတ်ကြရမှာဆိုတော့ နောက်တစ်ခါကျ နောက်တစ်မျိုးဆုံးဖြတ်လို့ မရတော့ဘူး။
ဒီနေ့အထိ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့အမှုအားလုံး ခုံရုံးကဆုံးဖြတ်တာ NLD ချည်းပဲနိုင်တယ်။ တခြားပါတီ ဘယ်သူမှမနိုင်ဘူး။ ဆိုတော့ ဒါကတရားမျှတမှုအတွက် စိတ်ပူစရာကောင်းတယ် …
အဲဒီလိုသာဆိုရင် ကျွန်တော်တို့လည်း မူဝါဒတွေ အမျိုးမျိုးထုတ်မယ်၊ ဝန်းရံသူတွေ ဘယ်လောက်သုံးသုံး ကိစ္စမရှိဘူး၊ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း မသုံးတဲ့အတွက် စာရင်းထဲမထည့်နဲ့ ရတယ်၊ အဲဒီလိုမျိုး မူဝါဒထုတ်လိုက်ရင် သူတို့လက်ခံရတော့မယ်လေ။ ၂၀၂၀ မှာ သူတို့လက်ခံရတော့မယ်။ ဟုတ်ပြီလား။ ပါတီတွေအကုန်လုံး လုပ်မှာပဲ။ အခုနောက်ပေါ်တဲ့ ပါတီတွေထဲမှာ ပိုက်ဆံတွေအများကြီးရှိတဲ့ ပါတီတွေရှိတယ်။ နောက်ဒုတိယတစ်ချက်က အသုံးစရိတ်တွေတင်တဲ့အခါ (၅၈) ရာခိုင်နှုန်းက တံဆိပ်ခေါင်းကပ်မထားဘူး။ အဲဒါကိုလည်း သူတို့ကလက်ခံတယ်။ ဘယ်လို လက်ခံလည်းဆိုတော့ ‘တံဆိပ်ခေါင်း ကပ်ရမယ်လို့ ဖော်ပြမထားတဲ့အတွက်’ တဲ့။ တချို့ကိစ္စက ဖော်ပြထားစရာမလိုဘူးလေ။ ၅၀၀ ကျပ်ကျော်ရင် တံဆိပ်ခေါင်းကပ်ရမယ်ဆိုတာ ပါပြီးသား။ နောက် ဒီ form ထဲမှာ စိစစ်တဲ့အခါ တံဆိပ်ခေါင်း ကပ် မကပ် စိစစ်ရန် ဆိုတာ ပါတယ်လေ။ ကပ်ရမည်၊ မလွဲမသွေ ကပ်ရမည်လို့မပါတာကတော့ မှန်တယ်။ ဒါပေမယ့်သူက အဲဒီလို (၅၈) ရာခိုင်နှုန်း တံဆိပ်ခေါင်းမကပ်တာကိုလည်း လက်ခံတယ်။ ဆိုတော့ သူတို့ကအဲဒါတွေပေါ်မှာစိုးတဲ့အခါကျတော့ ဘာလုပ်လာသလဲ ဆိုတော့ အရင်ဦးတင်အေး လက်ထက်တုန်းက ရေးခဲ့တဲ့ ဥပဒေတွေကို သုံးပြီးတော့ စီရင်ချက်မိတ္တူကို ပေးစရာ မလိုဘူးဆိုပြီး မထုတ်ပေးဘူး။ နောက်တစ်ခုက ဦးတင်အေးတို့ ထုတ်ခဲ့တဲ့ (၃၁/၂၀၁၅) အမိန့်ပေါ့။ အဲဒီအမိန့်ကဘာလဲဆိုတော့ သမ္မတတို့၊ ဒုသမ္မတတို့၊ ဝန်ကြီးချုပ်တို့၊ ဝန်ကြီးတို့၊ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတို့ စသဖြင့်ပေါ့၊ အဲဒီလူတွေက ရွေးကောက်ပွဲကာလမှာ မဲဆွယ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ညွှန်ကြားချက်ပေါ့။ အဲဒီအမိန့်ညွှန်ကြားချက်ဟာ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေနဲ့ ဆန့်ကျင်တယ်။ အဲဒီကာလတုန်းက ဒီအမိန့်ကို NLD က အရမ်းကန့်ကွက်ခဲ့တယ်။ ဒါမလုပ်ရဘူးတို့၊ ဒါအခြေခံဥပဒေနဲ့ ဆန့်ကျင်တယ်တို့ ဘာတို့ ပြောပြီးပေါ့။ ဒါပေမယ့် သူတို့မနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အခုကျတော့ သူတို့ ကန့်ကွက်ခဲ့ တဲ့ဥပဒေကို သူတို့ပြန်သုံးမှာလေ။ ၂၀၁၅ တုန်းက ဦးတင်အေးကော်မရှင်က ထုတ်ခဲ့တဲ့အမိန့်၊ အဲဒါကို သူတို့အကြီးအကျယ် ကန့်ကွက်ခဲ့တယ်။ အခု သူတို့လက်ထက်မှာ သူတို့တချိန်က အပြင်းအထန်ကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့ ဥပဒေကို ပြန်သုံးမယ်ဟေ့ဆိုတော့၊ ခင်ဗျား စဉ်းစားကြည့်လေ။ နိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်ရဲ့ သီလရှိတယ်၊ နိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်ရဲ့ ကျင့်ဝတ်ရှိတယ်။ အဲဒီ နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ ကျင့်ဝတ်၊ သီလ၊ နောက် ရိုးသားဖြောင့်မတ်မှု အဲဒါတွေကိုချိုးဖေါက်ရာမကျဘူးလား။ ကဲ။ ကိုယ်ကန့်ကွက် ခဲ့တဲ့ဥပဒေကို ကိုယ်လည်းအစိုးရဖြစ်ရော ဒါကိုပြန်သုံးတယ်ဟေ့ဆို ဒါလက်ခံနိုင်မလား။ ဆိုတော့ အဲဒီနှစ်ချက်ရှိတယ်ပေါ့။ အဲဒီနှစ်ချက်ပေါ်လာတဲ့အခါ ကျွန်တော်ကတော်တော်လေး စိတ်မကောင်းဘူး။ စိတ်မကောင်းလို့ အဲဒီဆောင်းပါးကိုရေးလိုက်တာပါ။ အဲဒါကို ကော်မရှင်က သိပ်မကျေနပ်ဘူး။ ‘ဘယ်ကောင် ဘယ်လောက်ဟောင်ဟောင် ငါတို့ကဥပဒေအတိုင်း ဆက်လုပ်မှာပဲ’ ဆိုပြီးပြောတယ်တဲ့။ “ ဘယ်လောက်ဟောင်ဟောင်” လို့တောင်ပြောတယ်။ ဒါကို။ ဆိုတော့ ပွဲတစ်ပွဲမှာ အဲဒီက ညွှန်ကြားရေးမှူး တစ်ယောက်နဲ့ဆုံတယ်။ သူက ‘ခင်ဗျားတို့က ဘာလို့အဲဒီလိုရေးရတာလဲ။ ဒီမိတ္တူကကူးလို့ရတယ်၊ (၁၃) ရက်နေ့ကျရင်လာခဲ့၊ ကျွန်တော်ကူးပေးလိုက်မယ်’ ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့လိုက်သွားကြတယ်။ ဟိုရောက်တော့ တကယ်တမ်းကျ မကူးပေးလိုက်ဘူး။ သူကဝန်ထမ်းပဲလေ။ ကော်မရှင်ဝင်တွေကို ဘယ်ကျော်လို့ရမလဲ။ သူလည်းမျက်နှာတွေပျက်နေတယ်။ အဲဒီတော့ ဘာလုပ်သလဲဆို အဲဒီစီရင်ချက်မိတ္တူကြီးကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး သူတို့ website မှာတင်ထားတယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်တယ်။ တကယ့်တကယ်တမ်းကျတော့ တရားဝင်ကူးပေးမလားဆိုတော့ မကူးပေးဘူး။ တရားဝင်ကူးပေးလို့ရရမယ်၊ ဒါ Certified Commission ပဲ။ နောက်တစ်ခုက ကော်မရှင်က ဘယ်လောက်ပဲ အပြီးအပြတ် လို့ပြောပေမယ့် ကျွန်တော်တို့က သမ္မတ စာချွန်တော် တင်လို့ ရသေးတယ်။ ဥပဒေအရ လွဲနေတယ်လေ။ အခုလို စီရင်ချက်မိတ္တူကို ပေးမပြတာ ကမ္ဘာမှာလည်းမရှိဘူး။ ကဲ ကောင်းပြီ၊ အခု စီရင်ချက် မိတ္တူကို ပေးမကူးတော့ဘူး။ နောက် ၂၀၂၀ ကျ အမှုတွေအများကြီးဖြစ်လာမယ်။ သူတို့ စီရင်ချက်ချတဲ့အခါ ဘယ်လိုချမလဲ။ စီရင်ချက်မိတ္တူကို မပြဘူးလား။ စီရင်ချက်မိတ္တူကို မပြရင်ဘာဖြစ်လာမလဲ။ တိုင်းပြည် မဆူနိုင်ဘူးလား။ စဉ်းစားကြည့်။
ရခိုင်တွေနိုင်နေရဲ့သားနဲ့ ရခိုင်ကိုဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတော့။ အခုရခိုင်ကိစ္စက အဲဒါပဲလေ။ ရခိုင်အမျိုးသားတွေ၊ ရခိုင်ပါတီတွေက နိုင်ငံရေးအရအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင် သူတို့မှာလမ်းတွေအကုန်ပိတ်သွားပြီ …
အဲဒီလောက် အန္တရာယ်များတဲ့ကိစ္စကြီးကို သူတို့ လက်ခံနေတယ်လေ။ ဆိုတော့ အခု ၂၀၁၅ ကစပြီး ဒီနေ့အထိ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့အမှုအားလုံး ခုံရုံးကဆုံးဖြတ်တာ NLD ချည်းပဲနိုင်တယ်။ တခြားပါတီ ဘယ်သူမှမနိုင်ဘူး။ ဆိုတော့ ဒါကတရားမျှတမှုအတွက် စိတ်ပူစရာကောင်းတယ်။ ကျွန်တော်အထောက်အထားမရှိဘဲ ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ဆီမှာ မှတ်တမ်းမှတ်ရာ လုပ်ထားတာတွေရှိတယ်။ ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့နဲ့ အဲဒီလို ကတောက်ကဆဖြစ်ပြီ ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ကို အချက်အလက်တွေ support လုပ်တဲ့သူတွေ အများကြီးရှိတယ်။ ဒီအချက်တွေရှိတယ် ဘာညာပေါ့။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ပြောတာ။ ဆိုတော့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့ တချို့ကိစ္စတွေက ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သင့်တယ်။ သူတို့ ကတော့ ဥပဒေအတိုင်းဆိုတာချည်းပဲ။ ဒီဥပဒေက သူတို့မကြိုက်တဲ့သူတွေလုပ်ခဲ့တဲ့၊ သူတို့ကိုယ်တိုင်တချိန်က အပြင်းအထန် ကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့ ဥပဒေလေ။ ဒီဥပဒေကို သူတို့အာဏာရတဲ့ အချိန်မှာသုံးပြီး ကျွန်တော်တို့ကိုလုပ်တယ်ဆိုတာ နိုင်ငံရေး ကျင့်ဝတ်အရ၊ နိုင်ငံရေးသီလအရ မလုပ်သင့်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကလုပ်တယ်လေ။ အဲဒါကို ကျွန်တော်ပြောတာ။ ဒါကြောင့် ၂၀၂၀ မှာ တရားမျှတမှုရှိမလားဆိုတော့ တော်တော်လေးပြောရခက်ပါတယ်။ တခြား တစ်ယောက်က တရားမျှတစွာနိုင်ခဲ့ရင်တောင် ခုံရုံးရောက်ရင်ရှုံးမှာပဲ။ ရှုံးဖို့ပဲရှိတာပေါ့ဗျာ။
ငြမ်းမီဒီယာ – ၂၀၂၀ မှာ ငွေများသူက မဲအသာစီးရလာတော့မယ် ဆိုတဲ့ အဲဒီဆောင်းပါးထဲက သုံးသပ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ရှင်းပြပေးပါဦး။
USNL – ဝန်းရံတဲ့လူတွေက ဘယ်လောက်သုံးသုံးလေ၊ ကိုယ်စားလှယ်မသုံးရင်ရတယ်ဆိုတော့၊ ပြီးပြီပေါ့။ အခု နောက်ပေါ်တဲ့ ပါတီတွေ ရှိတယ်၊ ပိုက်ဆံတွေအများကြီးရှိတဲ့ပါတီတွေ။
ငြမ်းမီဒီယာ – တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ ပြည်မကအင်အားကြီးပါတီတွေ လာရောက်ယှဉ်ပြိုင်မှုဟာ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ပြီးလုပ်ရတဲ့ အမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးကို ထိခိုက်စေတဲ့ အတွက် လာမပြိုင်သင့်ဘူးလို့ သုံးသပ်တာ တွေ ရှိသလို လာမပြိုင်ဖို့တောင်းဆိုကြတာတွေကိုရော ဘယ်လိုမှတ်ချက်ပြုချင်ပါသလဲ။
USNL – ကျွန်တော် အဲဒီအမြင်ကိုဆန့်ကျင်တယ်။ ကျွန်တော့်အယူအဆကတော့ တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ ပြည်မက ပါတီတွေ လာမပြိုင်ဖို့ တောင်းဆိုကြတာကို သဘောမတူဘူး။ အဲဒါကို ကျွန်တော်လက်မခံဘူး။ သူတို့ပြိုင်ချင်လည်း ပြိုင်ပေါ့ဗျာ။ ခုနကပြောခဲ့သလို စာနာစိတ်တို့၊ ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ဟာပါလားတို့ စတဲ့အချက်တွေကို သူတို့ဘာသာသူတို့ သုံးသပ်ပေါ့ဗျာ။ ဆိုတော့ အခု တောင်းဆိုနေ ကြတာရှိတယ်။ NLD လာမပြိုင်နဲ့ဆိုပြီးပေါ့။ ဒါပဲတောင်းဆိုနေကြတယ်။ အဲဒါမမှန်ဘူး။ NLD လာမပြိုင်နဲ့ပြောရင် USDP လည်း လာမပြိုင်နဲ့လို့ ပြောရမယ်လေ။ ဒါမှ မျှမျှတတဖြစ်မှာပေါ့။ ဒါက ကျွန်တော့် Idea ပေါ့။ အဲဒီလိုမျိုး တစ်ခုတည်းကိုပဲ လာမပြိုင်နဲ့ဆိုပြီး သွားပြောလို့မရဘူး။ USDP လည်း လာမပြိုင်နဲ့၊ တ.စ.ည လည်း လာမပြိုင်နဲ့၊ အခု ကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီလား သူတို့လည်းလာ မပြိုင်နဲ့၊ အဲဒီလိုပြောပေါ့။ ပါတီတစ်ခုတည်းကိုကွက်ပြီး မလာပါနဲ့ပြောတာမျိုးကိုတော့ ကျွန်တော်သဘောမတူဘူး။
ရခိုင်ပြည်နယ်ကောင်းစားရေးတို့၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးတို့ဆိုတာ ဘယ်လိုပဲစဉ်းစားစဉ်းစား စဉ်းစားလို့ကိုမရဘူး။ နိုင်ငံရေးအရ သူတို့လမ်းပိတ်နေတာကိုး။ ဟို မူစလင်တွေဖြစ်တဲ့ကိစ္စလည်း အဲဒီလိုပဲ။ ဒီအထဲကို ပေးမဝင်ဘူးလေ နော။ ပိတ်ထားတာ နှစ်ပေါင်းများစွာပိတ်ထားတာ။ ပေါက်ကွဲမှာပဲ …
လာမပြိုင်နဲ့ ပြောချင်ရင် အားလုံးကိုပြောပေါ့။ ဒါပေမယ့် တစ်ဖက်က ကြည့်ရင် ပြည်နယ်တွေမှာ အဲဒီပါတီပါတီတွေကို မဲပေးချင် တဲ့လူတွေ ရှိတာပဲ။ အဲဒီမဲပေးချင်တဲ့လူတွေရဲ့ဆန္ဒကို ကျွန်တော်တို့မျက်ကွယ်ပြုပြီး ဒီလိုမပြောသင့်ဘူးလေ။ အဲဒီတော့ ပြိုင်ချင်လည်းပြိုင်၊ ကိုယ်သာအရည်အသွေးရှိတယ်ဟေ့ဆို ဘာစိုးရိမ်စရာရှိလို့လည်း။ ဘာမှစိုးရိမ်စရာ မရှိဘူးလေ။ ကိုယ်အရည်အသွေး မရှိရင်တော့ ရှုံးမှာပေါ့။ ဒါကတော့ ရှင်းနေတယ်။ ဆိုတော့ NLD တို့၊ USDP တို့ ရှမ်းပြည်မှာ ပါတီရုံးတွေဖွင့်ပြီးတော့ လုပ်နေတာရှိတယ်လေ။ သူတို့ကိုအကူအညီပေးနေတာ ဒေသခံရှမ်းတွေ၊ ပလောင်တွေ၊ ပအို့ဝ်တွေပဲလေ။ ဒီလူတွေပဲ။ သူတို့က အဲဒီပါတီတွေကို အားကျလို့ကူညီကြတာလေ။ ဆိုတော့ ဒီမိုကရေစီလိုချင်ရင် ဒီလောက်တော့ စိတ်ဓာတ် ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့်ရှိမှရမယ်။ သွားကန့်သတ်လို့မရဘူး။ သူများကိုသွားကန့်သတ်ရင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း ကန့်သတ်ခံရမှာပဲ။
ငြမ်းမီဒီယာ – မေးခွန်းအစမှာပါတဲ့ ဒီလိုပြည်မကပါတီတွေ လာရောက်ယှဉ်ပြိုင်မှုဟာအမျိုးသား ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေး၊ ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေးတွေကို အဟန့်အတားဖြစ်စေတယ် ဆိုတဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေကိုရော ဘယ်လိုမှတ်ချက်ပြုချင် ပါသလဲ။
USNL – မဖြစ်ပါဘူး။ ဒီလိုယူဆတာဟာ လွဲပါတယ်။ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးဆိုတာဟာ အဲဒီလာပြိုင်တဲ့သူတွေရဲ့ စိတ်ကောင်း စေတနာကောင်းနဲ့ပဲဆိုင်တယ်။ သူတို့က တော့ပြောမှာပေါ့၊ ငါတို့လာပြိုင်တာပြည်မက လူတွေ ခေါ်လာတာ မဟုတ်ဘူး၊ တိုင်းဒေသကြီး က လူတွေခေါ်လာတာမဟုတ်ဘူး လို့၊ ဒီဒေသကလူတွေကိုပဲ ပြန်တာဝန်ပေးတာလို့၊ ဆိုပေမယ့်လည်း အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး လုပ်ချင်တယ်ဟေ့ဆိုရင် စိတ်စေတနာကောင်းက အများကြီးစကားပြောတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ပါတီထဲက တစ်ယောက်ယောက်ကို လာပြီးတော့ ‘မင်းငါတို့ထဲမှာ ဝန်ကြီးလာလုပ်’ ဆိုရင် ဒါသွားပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ တစ်ယောက်မှ လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကို နိုင်ငံရေးအရစဉ်းစားရင် …
ရခိုင်မှာဆိုရင်လည်း အဲဒီလိုပဲလေ။ သူ့လူပဲသူပေးတာပဲ။ ရခိုင်တွေနိုင်နေရဲ့သားနဲ့ ရခိုင်ကိုဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတော့။ အခုရခိုင်ကိစ္စက အဲဒါပဲလေ။ ရခိုင်အမျိုးသားတွေ၊ ရခိုင်ပါတီတွေက နိုင်ငံရေးအရအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင် သူတို့မှာလမ်းတွေအကုန်ပိတ်သွားပြီ။ ရခိုင်အမျိုးသားတွေအနေနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဝန်ကြီးချုပ် ဖြစ်ဖို့တောင် မလွယ်တော့ဘူးလေ။ ဆိုတော့ USDP ထဲသွားဝင်မလား၊ အဲဒါမှဖြစ်မယ်။ NLD ထဲဝင်မလား၊ အဲဒါမှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီတော့ သူလည်းမဝင်ချင်တဲ့အခါ နိုင်ငံရေးအရ လမ်းစပိတ်သွားပြီလေ။ နိုင်ငံရေးအရ လမ်းစပိတ်လာရင် စစ်ဘောင်ကျယ်တဲ့ဘက်ထွက်သွားမယ်။ အဲဒါကို အမြော်အမြင်ရှိတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ သိသင့်တယ်။ ခင်ဗျားစဉ်းစားကြည့်။ ကျွန်တော်တို့က ဖြစ်စေချင်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး၊ ဖြစ်နေတာကို မြင်လို့ပြောတာ။ အခု ဒီနေ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ကောင်းစားရေးတို့၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးတို့ဆိုတာ ဘယ်လိုပဲစဉ်းစားစဉ်းစား စဉ်းစားလို့ ကိုမရဘူး။ နိုင်ငံရေးအရ သူတို့လမ်းပိတ်နေတာကိုး။ ဟို မူစလင်တွေဖြစ်တဲ့ကိစ္စလည်း အဲဒီလိုပဲ။ ဒီအထဲကို ပေးမဝင်ဘူးလေ နော။ ပိတ်ထားတာ နှစ်ပေါင်းများစွာပိတ်ထားတာ။ ပေါက်ကွဲမှာပဲ။ ဘယ်အဖွဲ့အစည်း၊ ဘယ်လူမျိုး၊ ဘယ်ဒေသဖြစ်ဖြစ် ပိတ်ထားရင် မရပါဘူး။ လူသားပါ။ လူသားတွေဆိုတော့ ဖောက်ထွက်မှာပဲ။
ငြမ်းမီဒီယာ – တချို့နိုင်ငံရေးလေ့လာစောင့်ကြည့်သူတွေရဲ့ခန့်မှန်းချက်က ၂၀၂၀ ကျရင် ပြည်နယ်တွေမှာ တိုင်းရင်းသား ပါတီတွေ အနိုင်ရမှု ပိုများလာနိုင်ပြီး ပြည်မက ပါတီကြီးတွေဟာ အစိုးရ ဖွဲ့နိုင်လောက်တဲ့ ပမာဏမ ပြည့်မီရင် တိုင်းရင်းသား ပါတီတွေနဲ့ ပေါင်းပြီး ညွှန့်ပေါင်းအစိုးရပုံစံ ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တကယ်လို့များ ညွှန့်ပေါင်းအစိုးရ ဖြစ်လာခဲ့ရင် ဖက်ဒရယ်စနစ် အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ အခုထက်ပိုပြီး အားသာချက်တွေ ရှိလာနိုင်မလား။
USNL – မရှိနိုင်ဘူး။ ခုအတိုင်းဆို ညွှန့်ပေါင်းအစိုးရလည်း မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ သူတို့ညီလာခံမှာ ပြောနေပြီလေ။’ ညွှန့်ပေါင်းမလိုချင်ဘူး၊ ညွှန့်ပေါင်းမလုပ်ဘူး’ လို့။ နောက် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ (၂) ကိုယ်တိုင်ကလည်း ပြောပြီးသားပဲ။ ‘ဘယ်တော့မှလည်းမဟာမိတ်မရှိဘူး၊ ရှေ့ကိုလည်းမရှိဘူး’ ဆိုတာ။ နောက်ပြီးတော့ ဘာတောင်ထပ်ပြောလိုက်သေးလဲဆိုတော့ ‘တိုင်းရင်းသားပါတီတွေက ပေါင်းနေကြပြီ။ ပေါင်းပြီးတော့ပြိုင်ကြမှာ။ တကွဲတပြားစီပြိုင်ကြမှာ။ ဒါကြောင့် ငါတို့မှာလည်း ဗျူဟာရှိဖို့လိုတယ်။ တိုင်းရင်းသားရေးရာကော်မတီကို တိုင်းရင်းသားအစစ်တွေနဲ့ဖွဲ့မယ်’ ဆိုပြီး။ အဲဒါတွေကဗျာ။ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ နိုင်ငံရေးသမား အဲဒီလိုကိုယ့်လမ်းကိုယ်ပိတ်တဲ့ အလုပ်မျိုးကိုလုပ်တာ၊ ကျွန်တော်လည်းနားမလည်ဘူး။ ထားတော့၊ ဒါက သူ့သဘောပဲလေ။ ဆိုတော့ သူက အခုမဟာမိတ်လည်းမလုပ်တော့ဘူး၊ ပိတ် ထားတယ်ဆိုတော့ ကဲ ခုနကပြောတဲ့အခြေအနေမျိုး ရောက်လာပြီဆိုပါတော့။ NLD က (၄၈) ရာခိုင်နှုန်းရတယ်ပဲဆိုပါတော့၊ ကျွန်တော်တို့မှာ (၂ . ၅) ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်။ ပေါင်းရင် (၅၀ . ၅) ဖြစ်မယ်။ ဆို ဒါမျိုးကိုလည်း သူမလုပ်ဘူးပြောထားတယ်။ ဟုတ်တယ်မလား။ အရင် ၂၀၁၅ မှာလုပ်တဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ယောက်ချင်းကိုဖိတ်ခေါ်တာပေါ့။ ဦးအေးသာအောင်တို့ စသဖြင့်ပေါ့။ SNLD မှာတော့ အဲဒါမျိုးကိုလက်မခံဘူး။ ကမ်းလှမ်းမှုရှိတယ်ဆိုရင် ဆွေးနွေးမယ်။ ဒါပေမယ့် ပါတီ ပါတီချင်းပဲ ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပါတီထဲက တစ်ယောက်ယောက်ကို လာပြီးတော့ ‘မင်းငါတို့ထဲမှာ ဝန်ကြီးလာလုပ်’ ဆိုရင် ဒါသွားပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ တစ်ယောက်မှ လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကို နိုင်ငံရေးအရစဉ်းစားရင် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်က ဝန်ကြီးဖြစ်ချင်ရုံလောက်နဲ့၊ အဲဒီလောက်နဲ့တော့၊ ဒါက သူဘာသာသူ ပြန်စဉ်းစားပေါ့။ ဆိုတော့ အခု သူကလည်းလက်မခံဘူးဆိုတော့ တိုင်းရင်းသားတစ်ယောက်မှမရှိတော့ဘူး။ အဲဒီတော့ ဒီနေ့ကျမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောတယ်၊ ‘စုပေါင်းမှကောင်းနိုင်မယ်၊ စုပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားရှိမှ ကောင်းနိုင်မယ်’ ဆိုတာကို။ ဒါ ခုကျမှ ခုနက ဆရာဇော် (ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်) ပြောသွားတာနဲ့ ဆန့်ကျင်ပြီးပြောသွားတယ်။ ဆိုတော့ ညွှန့်ပေါင်းလည်းမလုပ်ရင် သူဘာလုပ်မလဲ။ ပါတီအနေနဲ့ လူကြိုက်များမှုရာခိုင်နှုန်း နည်းနည်းကျလာပေမယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က တော့ (၇၀) ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ကောင်းတယ်။ အဲဒါကြောင့် အရင်ဦးတင်အေးတို့ထုတ်ခဲ့တဲ့ (၃၁/၂၀၁၅) ကို သုံးမှာလေ။ ဒါမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်၊ ဦးဝင်းမြင့်ကိုယ်တိုင် ထွက်ပြီးမဲဆွယ်လို့ရမယ်။ အများအတွက်မဲဆွယ်ပေးရမယ်။ ဆိုတော့ NLD မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မဲမဆွယ်ရင် အများကြီး ကျသွားမှာ။ ဒါကို ကျွန်တော် ခုနကပြောတာ။ သူတို့ နိုင်ငံရေးသီလတွေ၊ ကျင့်ဝတ်တွေ ဖောက်ဖျက်ခံပြီး ဒီ (၃၁/၂၀၁၅) ကိုပြန်သုံး မှာလေ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အားက အဓိကကျတာကိုး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မဲမဆွယ်ရင် သူတို့လည်း သိပ်တော့ မလွယ်ဘူး။
Tags: SNLD, တိုင်းရင်းသား, နိုင်ငံရေး, ရွေးကောက်ပွဲ